Diyaarinta digniinta 10 kun oo sano ee sunta nukleerka ee ku aasan dhulka | Gaaroodi News
Diyaarinta digniinta 10 kun oo sano ee sunta nukleerka ee ku aasan dhulka
August 13, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Haraadiga Nukleerka ee lagu aasay dhulka hoostiisa wuxuu kumannaan sano sii ahaanayaa mid sun ah islamarkana halistiisa leh.
Hadaba sidee loo dhisi karaa ama loo sameyn karaa digniin la fahmi karo si mustaqbalka jiilka soo socda ay uga digtoonaadaan?
“Goobtani ma aha meel wanaagsan,” waxaa sidaas lagu muujiyay qoraal. “Wax qiimo leh halkan kuma jiraan, waxa halkan ku jira waa halis, dhammaan fariimahan waa kuwa digniin bixinaya.”
Balse ujeedada fariimahan waxay tahay in dadka looga digo xarunta lagu aaso haraadiga Nukleerka ee ku taalla saxaaraha New Mexico.
Waa goob wayn iyo godad loogu talagalay in lagu aaso haraadiga hubka Nukleerka Mareykanka.
Suntan nukleerka ee halkan ku aasay waxay halis sii ahaaneysaa illaa muddo 300,000 oo sano ee soo socota.
Hay’adda WIPP ee ilaalisa waxyaabaha sunta ah ee ka haray hubkan halista ah ee dhulka lagu aasay ayaa imika ah hay’adda kaliya ee shatiga u haysata in ay la socoto haraadiga nukleerka guud ahaan caalamka.
Xarun midaasi la mid ah ayaa lagu wadaa in dalka Finland laga furo sannadkan 2020.
Marka ay xarunta buuxsanto 10 sano illaa 20 sano ee soo socota, godadkan ayaa baa’bi doona waxaana lagu warejin donaan caro iyo qalab kale oo astaan u ah in goobtaas lagu aasay waxyaabo sun ah oo halis wayn geysan kara.
Waxaa sidoo kale goobtaas laga taagi doonaan digniino muujinaya halista ay leedahay. Aaasidda haraadiga Nukleerka ayaa u baahan goob ballaaran oo dhulka hoostiisa ah oo lagu aaso
Dismaha goobtan wayn ee imika calaamadda u ah meel lagu keydiyo sunta nukleerka ayaa la baa’bin doonaan.
Fariimaha ku qoran waxay noqon doonaan kuwa “ay bulshadeen hadda ay isku dayayaan in ay kula xiriiraan jiilalka imaan doona kumannaanka sano ee socda”.
Qorshaha wuxuu yahay in loo baahan doono dhul ballaaran oo dhanka balaca gaaraya 7.6m, dhanka dheerarkana 10sq km oo ka baxsan xuduuda goobta hadda jirta ee sunta lagu daadiyo.
Xaruntan waxaa ku dhagan boor ay ku qoran tahay “Ha galin” waxaana ku sii qoran macluumaad la xiriira waxa goobta ku aasan oo ah haraadiga Nukleerka.
Haddii macluumaadkan uu noqdo mid aan la akhrin karin, waxaa jirta goob kale oo 20-fiit dhulka hoostiisa
Macluumaad digniin ah oo faahfaahsan oo la xiriira xaruntan lagu aaso haraadiga Nukleerka ee WIPP, ayaa la dhigi doonaa goobaha lagu keydiyo dikumiintiyada iyo macluumaadka muhiimka ah ee guud ahaan caalamka.
“Ku soo dhawaaw barashada calaamadaha ama tilmaamaha Niyukleerka.”
Waxyaabaha ay soo jeedisay hay’adda WIPP, ee loo xilsaaray la socodka haraadiga waxyaabaha halista ah, waxaa inta badan galaangal ku yeeshay khiyaaliga Seyniska.
Khubarada nukleerka, injineerada, qooraayaasha, khubarada darsa aasaarta, ayaa isu yimid si ay uga tashadaan sida ugu haboon ee jiilka mustaqbalka loogaga digi karo haraadigan dilaaga ah. Dowladda Filand ayaa imika dhisaysa xarun lagu aaso haraadiga Niyukleerka
Nasiib darro fikirkii ahaa in goobtaas lagu aasay sunta nukleerka in lagu talaalo dhir si ay keyn wayn u noqoto ayaan weli la fulin.
Thomas Sebok oo ah khabiir ku xeeldheer luuqadaha ayaa markii ugu horeysay sannadkii 1981, hindisay ereyga “nuclear priesthood”.
Balse caalamadahan ka digaya halista goobaha lagu aaso haraadiga Nukeerka ayaa ah kuwa ay xitaa aysan fahamsanayn bin’aaadamka hadda nool, iskaba daayo jiilalka mustaqbalka dhalan doona.
Daraasad ay sameeyay hay’adda quwada Atoomikada ayaa muujinaysa in illaa boqolkiiba 6% keli ah oo ka mid ah dadka maanta caalamka ku nool ay aqoonsan karaan calaamadaha ka diga suntan halista ah ee ka hartay Nukleerka.
Haraadiga Nukleerka ee lagu aaso dhulka hoostiisa waxaa uu mar walba u baahan yahay in goobaha lagu aaso ay ku yaallaan calaamado muujinaya halista uu leeyahay ama ka dhalan karta.